Odeessa qabatamaa: Bilxiginnaan yeroo filannoo dheeressuuf – Ayyaantuu
HomeAfaan OromooOdeessa qabatamaa: Bilxiginnaan yeroo filannoo dheeressuuf
Odeessa qabatamaa: Bilxiginnaan yeroo filannoo dheeressuuf wal mari’ataa jirti
PM Abiy Ahmed with notorious Oromo hater Professor Getachew Haile (core Amhara). The Professor wrote a lot about the history of the Oromo people and never accepted the name Oromo. He recognizes only Galla. Abiy searches for such shameful people to associate with.
” Nageenya biyyaa fi naannoo keenyaas mirkaneessuuf KFO fi ABO akkuma goone goonee filannoo irratti akka hirmaatan gochuu qabna” Qondaaltota Bilxiginnaa olaanoo fi Qaamota nageenya Oromiyaatu jechaa jira!
KFO fi ABO’n filannoo keessaa of baasuun qondaaltota bilxiginnaa olaanoo biratti mataa dhukkubbii yoo tahu, ajajoota humna addaa fi raayyaa ittisa biyyaa birattis gaafii kaasaa jira.
“Nageenya biyyaa fi naannoo keenyaas mirkaneessuuf jara kana akkuma goone goonee filannoo irratti akka hirmaatan gochuu qabna” jechaa jiru! Sanaaf immoo yeroon waan hin jirreef ammas Koronaa sababeeffatanii yeroo filannoo achi butuuf jiru.
Leenjii dabballee Oromiyaa keessatti geggeeffamaa jiru irratti dabballoonni Biltsiginnaa gaaffiilee hedduu kaasaa jiru.
Keessattuu, dhimma filannoo irratti gaaffileen dabballoonni aanotaa fi godinootaa kaasan jalqaba torbee darbee walitti qabamee gara waajjira paartiitti ergamee ture. Qondaalonni PP gaaffilee kaahaan kana arganii baay’ee rifataniiru.
Gaaffiwwan kaahaan keessaa muuraasa ilaaluuf:
Paartileen Oromoo filannoo keessaa maalif dhiibamanii bahan?
Afaanuma kaleessaa waa’ee mirgaa dubbataa turreen akkamitti har’a waa’ee diinummaa dhaabbilee Oromoo dubbanna?
Nuti amma maaliin Wayyaanee irra adda taane?
Filannoon kun namni hirmaatu yoo hin jiraanne nageenya keenyaa fi kan biyyaafis balaadha waan taheef yeroof yoo hafe hoo?
Ummanni nuharkatti beela’e. ummanni nu jiraachisuuf hin deemuu fi gaaffilee hedduu kaasaniiru.
Geggeessitoonni olaanoon egra gaaffilee kana dhaga’anii rifatanii tooftaa gara garaatiin sossobuuf yaalaa jiran. Hundaa’olitti yaaddoo guddaan dabballoonni gara gadii ummata wajjiin nurratti finciluuf jiran jedhu dabalaa dhufeera.
Odeessa qabatamaa damee tikaa mootummaa keessaa bahe
Odeessa qabatamaa damee tikaa mootummaa keessaa bahe kana akkuma jirutti qalbiin dubbisaa Yaya Beshir "Yaya…
Appeal for Intervention in Ethiopia to End the Ongoing Bloodshed in Oromia